JustControl.it: Automate Attribution Dhata Kuunganidzwa Pakati PeMigwagwa | Martech Zone
Kushambadzira kwedhijitari kunoitiswa nekudiwa kwekuita kukuru gobvu.
Ndicho chikonzero nei vanobudirira uye vanoshuvira nyanzvi vachida zvinoshanda unosimudza kubata nemamiriro akaoma nemifananidzo yakaoma. Nekudaro, maturusi mazhinji aripo achiri kupa yechinyakare 'imwe-saizi-inokodzera-ese' maitiro. Mukati meichi chimiro chekutanga, zvese zvingangoitika zvekushambadzira zvakafanotemerwa kubva pakutanga chaiko, pasina mukana wekufukidza zvinodiwa nemunhu wese. Panguva imwecheteyo, dhiyabhorosi anogara ari mune zvakadzama.
Saizvozvo, musika wanhasi unoda maturusi emidziyo kwete maturusi, kuitira kuti vatengi vagadzire yavo mirau, kuyerera kwedata, metriki, nezvimwe.
JustControl.it, mhinduro nyowani yepamberi data analytics, kuyedza kuzadza mukaha uyu. Muchikamu chino, pfupiso pfupiso yeiyi nyowani yekushandisa bhokisi rekushambadzira kwedigital rinopihwa Kuti uratidze kugona kuzere kweJustControl.it, chinyorwa ichi chinemimwe mienzaniso inoshanda yekuti inowana sei, inogadzirisa, uye inoshandura dhata.
JustControl.it Chigadzirwa Ongororo
JustControl.it yakamisikidzwa zviri pamutemo semhinduro inoita kuti zvikwanisike kumabhizinesi kushandisa kutonga kuzere pamusoro pekushambadzira kushambadzira, kuongorora mashandiro emushandirapamwe munzira dzakasiyana dzinoyevedza, uye kugadzira mishumo yakaitwa panguva yakakodzera. Saka nekudaro, inovimbisa inoshanda ETL injini uye otomatiki kugona kwematafura mepu zvichibva pane akawanda masosi mune imwe UI.
Parizvino timu yeJustControl.it inotaura kuti zvingangoita makumi matatu data zvinyorwa zvinogona kubatanidzwa ipapo ipapo kune vatengi vayo.
Panguva imwecheteyo, mutambi mutsva anosimbisa kuti inogona kumisikidza chero sosi yedhata pane zvinodiwa. Iyo 'denderedzwa' yazvino yakaumbwa uye yakatsanangurwa nevatengi vayo. Kana kudiwa kwekubatanidza imwe nyowani kukamuka, ichave yakabatana mahara. Rakajairwa rwendo rwevatengi uye neboardboard maitiro, sekureva kwaJustControl.it, inotaridzika nenzira iyi.
Kamwe chirongwa chedemo chaendeswa, timu yeJustControl.it inokumbira mutengi kuti azadze-pfupi kuti ajekese zvese zvemuenzaniso wedhisheni yemuenzaniso uye obatanidza masosi akabatanidzwa kuakaundi yavo JustControl.it.
Mushure meizvozvo, muenzaniso wemuenzaniso - nezvose zvakabatanidzwa - zvinomisikidzwa uye zvakagadzirirwa.
Kana mamiriro acho akagadziriswa, tsika yakaitwa mushumo inogadzirwa. Mhedzisiro yacho inozooneswa ichipesana nenhamba dzevatengi.
Chekupedzisira, mamwe ese mamiriro anoitwa.
JustControl.it yakaburitswa kwete kare kare. Ndosaka pasina kuwanda kuwongorora kwevanhu kwakaburitswa kusvika parizvino. Panguva imwecheteyo, pane zvatove vamwe zvakanaka mhinduro inowanikwa. Iwo makambani anoratidzira kuvimbika kwemishumo yedata yakasvibirira, yakafara maitiro ekugadzirisa ane chekuita nekugadziriswa kwedata uye mepu, pamwe nekureruka.
Zvingave zvinonakidza kutarisa kuti JustControl.it yakafanirwa sei neaya akanaka ongororo.
JustControl.it Data Kugadziridza kugona
Zvinoenderana nechikwata cheJustControl.it, mhinduro yavo inokwanisa kwete chete kuburitsa mbishi dhata 'sezvazviri', asiwo nezvimwe zvinhu.
Chekutanga pane zvese, iro rekushandisa rinoburitsa mbishi data Mumazita emushandirapamwe, ma tag emunyika, mamaneja, uye mapuratifomu anogona kuzivikanwa. Zvinonzi, ne JustControl.it, hapana zvirambidzo pane chero mhando chaiyo yemushandirapamwe. Huwandu husingagumi hweyero yetsika uye mafirita avo anovimbiswa, pamwe nenhamba isingaverengeke yemakoramu, ese akaverengerwa KPIs uye metric. Kubvisa metadata kwave chaiko.
Mushure meizvozvo, iyo data inosvinwa nemaneja, mapuratifomu, mamaneja, nezvimwe.
Muchikamu chechitatu, ruzivo rwakanangana nerubatsiro kubva kumatrackers uye / kana mukati meBI mhinduro dzinogona kuwedzerwa uye kusanganiswa.
Kamwe kana data rakadai rave kuwedzerwa, info nezve masosi uye imwe dhata 'ma tag' anogona kuwedzerwa.
Chekupedzisira, mafirita nenyika uye mapuratifomu kune ese masosi akabatanidzwa akaiswa. Nekuda kweizvozvo, pikicha imwechete yakavakirwa pane akasiyana data zvidimbu inogadzirwa. Ndokureva, mushumo unodikanwa pakuita sarudzo unogona kugadzirwa.
Kana zviri zvezvino kutaridzika uye kunzwa kwemhinduro, anotevera anoratidza sampuli anogona kuratidzwa.
General dashboard ine ingangoitika data renji:
General dashboard ine sarudzo yeakasarudzika tsika dhijitari.
General dashboard ine muyenzaniso wetsika mafirita akaiswa
JustControl.it inosimbisa kuti kugona kwekugadzirisa kweanogona kutaurwa pamusoro apa hakugone. Muchikamu chinotevera, iwe unogona kuona kuti ndeupi hurongwa unobvumidza izvi zvingangoita zvisingaite.
JustControl.it Kuisa Muenzaniso Wemaenzaniso
Iyi kesi yakavakirwa pane zviitiko zvinoitwa nesangano rekutenga midhiya vachishandisa dzinosvika makumi mana masosi, kusanganisira iyo ZvirongwaFlyer tracker uye network. JustControl.it nemaoko akagadzira mishumo miviri inovhara zvinodiwa nevatengi.
Chirevo chekutanga mhedzisiro yeiyi data kugadzirisa kuyerera muchiito: akaunganidzwa akaomeswa data ane chekuita nekushambadzira kushambadzira pane ese anoshanda sosi. Iyo inogadzirisa rese data muhuwandu hwayo ichitora zvivakwa zvayo mukutarisa (senge dzakabatana zvikwata pasi kune mumwe mutengi, chiteshi, nezvimwewo).
Chirevo chechipiri chakanangana nekupa pikicha iyo isingatarise neyakavhurika dhata, asi nemametric akaverengerwa - iwo akaverengerwa ipapo uye akavakirwa pamafomula anogadziriswa. Iyo chaiyo renji yemametric inosanganisira anotevera madhivhuru.
Kuti zviite kuti zvikwanisike, timu yeJustControl.it yakagadzira yakateedzana zviito zvakaratidzwa pazasi.
Izvo zvinokosha kuti ndiyo iyo JustControl.it rutsigiro timu iro inovaka aya ekugadzirisa data kuyerera. Nekudaro, mupi wemhinduro anotora kuti, zvishoma gare gare, kugona uku kuchavepo kune vatengi kuitira kuti vagone kuzvivaka vega.
Parizvino, mwedzi mumwe wemahara muedzo uripo. Dhijitari vamiririri uye vagadziri veapp vanogona kuodha demo uye voiyedza vega pa JustControl.it. Vazhinji vatengi JustControl.it ine, iyo yakawanda masosi iyo ivo yavanobatanidza kuti ishandise ipapo.
Dhata sosi yekubatanidzwa parizvino inosanganisira Google, Facebook Ads, TikTok, CSV, Excel, YouAppi, AD Colony, adcash, Adperio, ADSKEEPER, Adsterra Network, Affise, AppSamurai, APPLIFT, appnext, AppsFlyer, chinja, BeaverAds, Chartboost, Clickadu, EngageYa, ExoClick, Fyber, IronSource, Liftoff, mgid, VK, Yandex Direct, MyTarget, PropellerAds, Remerge, Revcontent, RichPush, Snapchat, Tapjoy, UNGADS, kubatana ADS, Vungle, Mintegral, uye Zeropark.
Tags: AD ColonyanonashchinjaAdperioADSKEEPERAdsterra NetworkAdsterra_networkAffiseApp SamuraiShandisaappnextZvirongwa FlyerAppSamuraiappsflyerbasakuongororwa kwekupaBeaverAdsChatiBoostClickadumuchinjiko-chiteshi kupiwaCSVEngageYazvakanakisisaexoclckexoClickFacebookfacebook adsfaibhagoogleIron_SourceironSourcejustcontrol.itSimudzamgidhamintegralmyTargetPropellerAdsremergeRevcontentRichPushsnapchattapjoyTikTokTwitterUNGADSkubatana ADSkubatanaADSvkVolumeSangoYandexYandex YakanangaYouAppiZeropark